फिनल्यान्डमा १६ वर्षीया किशोरी बनिन् एक दिनका लागि प्रधानमन्त्री, के गरिन् उनले ? « प्रशासन
फिनल्यान्डमा १६ वर्षीया किशोरी बनिन् एक दिनका लागि प्रधानमन्त्री, के गरिन् उनले ?
प्रकाशित मिति : 8 October, 2020 10:55 am
काठमाडौँ । फिनल्यान्डमा १६ वर्षीया किशोरी एक दिनका लागि प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले लैङ्गिक भिन्नता अन्त्यको निम्ति लड्न थप कदम उठाउँदै १६ वर्षीया किशोरीलाई आफ्नो कुर्सी बुधवार एक दिनको निम्ति हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।
उनले नेतृत्व गरेको मध्य–वामपन्थी गठबन्धनमा चार वटा दल छन्। ती सबै दलको नेतृत्व महिलाले गरेका छन् र तीमध्ये तीन जना ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। बीबीसी
Tags : प्रधानमन्त्री फिनल्यान्ड